Safarka Mareykanka ee Yurub: Madaxweynaha oo Soo Saari Doona Hadal Maalmo Kooban
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Safarka Mareykanka ee Yurub: Madaxweynaha oo Soo Saari Doona Hadal Maalmo Kooban
Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Merkel iyo Biden waxay ka wada hadleen Safarka Mareykanka ee Yurub
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ahayd hogaamiyihii ugu horeeyay ee reer Yurub ah ee booqda Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Aqalka Cad iyadoo mowduucyo ay kamid yihiin safarka Mareykanka ee Yurub.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ahayd hogaamiyihii ugu horeeyay ee reer Yurub ah ee booqda Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Aqalka Cad iyadoo mowduucyada ay ka mid yihiin safarka Mareykanka ee Yurub.
Mawduucyada wadahadalada labada dhinac waxaa ka mid ahaa isbedelka cimilada, tallaalada COVID-19, weerarada internetka ee Ruushka, Yukreyn iyo dardar gelinta dimoqraadiyadooda, iyo sidoo kale safarka u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub.
Kordhinta dhowaan ee kiisaska COVID-19 sababo la xiriira kala duwanaanshaha Delta ayaa hakad gelisay xaddidaadda safarada Mareykanka ee weli socota.
Chancellor Merkel waxay tilmaamtay inay ku kalsoontahay kooxda COVID ee America.
Madaxweyne Joe Biden wuxuu sheegay inuu dhawaan awood u yeelan doono inuu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan safarka Mareykanka ee ka yimaada Yurub maadaama uu keensaday xubno ka tirsan kooxdiisa COVID markii Chancellor Merkel ay weydiisay su'aasha intii lagu jiray wadahadaladooda labada dhinac maanta. Merkel waxay tiri "kalsooni kasta oo ay ku qabto kooxda American COVID".
In kasta oo xaqiiqda ah in Yurub ay ka khafiifisay xayiraadihii socotada Mareykanka bishii hore, haddana Mareykanku wuxuu xayirayaa xayiraadaha safarka ee adag sababo la xiriira faafitaanka kala duwanaanshaha Delta.
Ku xigeenka Madaxa Arimaha Bulshada iyo Siyaasada ee Ururka Socdaalka Mareykanka Tori Emerson Barnes ayaa soo saartay bayaankan soosocda ee ku aadan hadalka Madaxweyne Biden ee dib u furida safarada caalamiga:
“Waxaan soo dhaweyneynaa hadalka madaxweynaha, oo aan maanta la wadaagnay ra’iisal wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, in macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga qaadista xayiraadaha safarka caalamiga ah ay imaan karto 'maalmaha soo socda gudahood.